Lokho kusho ukuthini Ukraine visa-free umbuso ne-EU?
Ngakho, lezo zinto zenzekile. Omunye imigomo ye Maidan izuzwe. Kunalokho, ishiywa kuze kube izinyathelo ezimbili, kodwa lena Okusemthethweni. Ukraine uzokwazi ukuhamba kuleli hlobo eYurophu nge ipasipoti evamile, bengabheki ukuthi uma sikubeka ukuphrinta. Ngeke kudingeke ukuba bame emigqeni emahhovisi ezimela futhi akhokhe 35 Imali euro. Kodwa ngisho ebhizinisini ngemali. Ukraine njengoba kube ngxenye yeYurophu. Lena okushiwo amazwana nomdlandla, idatha, abaholi phezulu isimo semiphumela yokuvota e-European Parliament. Ngakho mayelana umongameli wathi Poroshenko bejabula impumelelo. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi la mazwi empeleni umgomo?
Izinhlinzeko eyinhloko version olusemthethweni
U-Adalberto isikhathi eside, ezingaphezu kuka-iminyaka emithathu, abantu base-Ukraine batshelwa ukuthi ukwethulwa visa-free umbuso izomaka hhayi kuphela ukuqala indlela eya EU ubulungu, kodwa futhi ukudlula ingxenye enkulu-ke. Lokhu kuzosiza ukuthuthukisa oxhumana ibhizinisi, ngcono ukusebenza mahhala ukuhweba zone ne-EU, ezijulile kakade futhi olubanzi. Ngaphezu kwalokho, kakhulu kwaqinisa ithemba, njengoba exchange kolwazi tekusebenta kanye ngokuhlanganyela ingozi ukuhlaziywa kuyoba ngokushesha phakathi amasevisi, kudlule nasemkhawulweni ka-EU Member States nase-Ukraine.
Futhi bayakhohlwa ukuxhumana ezokuvakasha ezihlobene zezakhamizi, ibhizinisi, nokubambisana yesayensi kanye nokuxoxisana ngemasiko? Bezviz cishe - cishe EU ubulungu. It kuzokuvumela Ukraine ukuzizwa sengathi baseYurophu ngempela. Ngaphambili, umngcele osentshonalanga ubengase ukuwela izintandokazi futhi manje - konke! Lo mcimbi zomlando, ngemva kwalokho esinye isihlobo izovela umndeni anobuhlobo wezizwe. Ngakule vein ubeke amathemba bezviza, futhi manje kwaba nokuvutha intshiseko yafinyelela umvuthwandaba.
Kwamanye amazwe umbuso visa-mahhala nge-EU?
Lapho target kufinyelelwe, okwamanje injongo kokuhlaziywa yi. Iqiniso liwukuthi amathemba YaseYurophu visa-free umbuso akuyona ngqo olufanele. It uba phakathi European Union kanye amazwe ezinhle amahlanu zomhlaba. Owokugcina kubo baba Georgia ne Moldova, kodwa ngaphambi kwalokho ukufinyelela Schengen wathola izakhamuzi zamazwe ehlukene, kuhlanganise Dominican Republic, Grenada, St. Vincent, St Lucia, Bosnia and Herzegovina: Macedonia, Argentina, eChile, eParaguay, Honduras , Guatemala, Panama, Nicaragua bese uhlu olude. Ukuthatha wonke noma ibalazwe sezwe sezombangazwe, wonke umuntu kanjalo, ungaqiniseka ngokuthi akubona bonke laba amazwe aseYurophu, futhi ngokufika ku uhlobo oluthile "emndenini owodwa lezizwe" abahlali sabo hhayi wabonisana njalo. izakhamuzi ezivamile lala mazwe ongeza EU, sigcina imithetho ethile.
Kuyini bezviz umbuso?
Okwakushiwo Ukunqamula emngceleni wukuthi izakhamuzi kwamanye amazwe Unelungelo ukuze bawele umngcele ka-European Union futhi imi endaweni yayo izinsuku ezingu-90 njalo ezinsukwini ezingu-180. Ngamanye amazwi, cishe izinyanga ezintathu, izinyanga eziyisithupha, akusho ukuthi okuqhubekayo, can ngokwengxenye, kodwa inani hhayi isikhathi eside. Uma ngasizathu simbe odinga, visa kuyodingeka babhalise. Lesi sikhathi kungasetshenziswa ukuze uhlale nezihlobo (uma), vakashela iminyuziyamu, zemibukiso, amathiyetha nezinye izinhlangano zamasiko. Uma othile efisa angaqeda predilections yabo enkulu ukudla, ukuthi kakhulu - sicela. Sangikhuthaza isithakazelo izakhiwo kanye izikhumbuzo komlando. Ngokuvamile, ngokuya ezokuvakasha alunamkhawulo. Kodwa ngokuvamile bakuphi.
Yini engenziwa, ufika ngaphandle visa?
Kwezithibelo eziphathelene ilungelo ukusebenza kanye neminye imisebenzi ehlobene kokuthola iholo. izinhloso Sikhungo nocwaningo, nakuba kukuningi okuye kwashiwo ngazo, futhi abanalo maqondana bezvizu. Izinhlelo ze-undergraduate kanye iziqu abafundi lapho, kodwa ukungena emazweni EU it unikezwa nge yokubhalisa ezimela. Njengoba ibhizinisi, kusho ukuthi bangakwazi mayelana nebhizinisi yabo ukuza Europe njengoba befuna (kodwa ngokuvamile ayisishiyagalolunye izinsuku kubo kulokhu kusebenza, kakhulu), kodwa kunzima ukucabanga usomabhizinisi okuqinile, ongenayo 35 euro visa. Noma yisiphi isakhamuzi Ukraine, ngubani okuhloswe ukuba uthole umsebenzi, eza ngaphakathi umbuso visa-free kuyothathwa ukuthi ayikho emthethweni, ke badingiselwa futhi uzokwenza uhlu ekhethekile, khona-ke ungakwazi ukukhohlwa ngempela ngokuvakashela Europe.
Uyini "Schengen wokubala"?
Isikhathi yokuhlala zonke owezizwe e-European Union kubalwa ngokuzenzakalelayo. Uma umuntu ecabanga ukuthi ungakwazi, njengoba ayefike ngaphandle visa endaweni Schengen, "walahlekelwa esixukwini" futhi ahlale ethule, umsebenzi emthethweni, ukuphila iminyaka eminingi "IPharadesi Western", nguye iphutha sina. Ngemva kokuphela kosuku olunqunyiwe sizoqala ngifuna futhi cishe uyokuthola. Ngemva kwalokho, igama bouncer, futhi, kuyoba ohlwini lwabantu engathandeki. Ngeke isikhathi eside ukuya eYurophu ngaphandle visa, futhi kuye. Futhi uma kuyoba eziningi uhlakaniphile, ngokuvumelana ukusungula inqubo ukumiswa, bezviz livalelwe zonke izakhamuzi zase-Ukraine.
Wayengubani ngokumelene nalo?
Abamele hhayi wonke amazwe EU asekelwe nokwethulwa a umbuso visa-free ne-Ukraine. Kiev ngokusemthethweni ulandela izimo esabekwa ngalo, futhi kwakukhona okuningi engaphezu kwekhulu, kodwa izinga ... Thina MEPS babe bakhathazeka kufanele ngenhlala ukwanda okunamandla ubugebengu kanye izinga kufuduka emthethweni. Ekuqaleni, France, Italy neJalimane wenqaba, kodwa Netherlands awukwazi ukhumbule, kukhona indaba inhlolovo ufinyelelwe. Abaphikisi abaningi asebenzayo manje kubhekwe eParis, futhi uma kukhona ukubambezeleka ukusebenza nezinqubo zakamuva, izizathu zazo kungenziwa wafuna kule enhlokodolobha yaseYurophu.
Ungakwazi nje niqhubeke out?
Ngenxa yalokho, "control ubuso" emngceleni EU akuyona umkhuba, futhi uma izwe elithile yasayina isivumelwano ku-visa-free entry, ezimweni eziningi, waqaphelisisa. Lokho nangobudlova bureaucratic efomini yokwenqaba engenabulungisa akakwazi esabe. Enye into, uma kukhona noma yisiphi isizathu-ke. Ukuze labo kungabandakanya:
- Ukungabi bikho ithikithi ukubuya ne ohambelana "Schengen wokubala" usuku sokuhamba.
- Ukusabela ingaphelele umbuzo mayelana inhloso yohambo.
- okuqukethwe asole esandleni imithwalo.
- Ukuba "uhlu black" ka mthetho ka-visa-free umbuso.
- Ukungaqiniseki lokuhlala ezweni uya khona.
- Ukungabi khona lemali edingekayo imali.
- Okunye nezizathu ezizwakalayo zokwenqaba.
Isivumelwano ku-visa-free umbuso esayinwe amazwe 26 ngaphakathi zone Schengen. Ngaphezu kwalokho, ukuze uvumele Ukraine Cyprus, Croatia, Romania futhi Bulgaria, njengoba lezi uthi isicelo entry "Schengen club." isikhundla Special eSwitzerland, EU akalona ilungu, kodwa akulungele kusita ngemva kokuvumela yayo yokugcina isinqumo ngokuhlanganyela.
Ukuphuza senzakalo esijabulisayo zabahlali abavamile
Njengoba kuboniswa "hot" isiteshi Izindaba Kwenye inhlolo-vo, alamukela ngesasasa ngaphambi kwesikhathi kungenzeka (ehlobo) isingeniso bezviza% 10-15 kuphela kwezintathu yabantu okwaxoxwa. Akubona bonke babo cishe ukuzilungisa for uhambo oluthakazelisayo, futhi umuntu, mhlawumbe uyabajabulela abanye, nenhlanhla ngaphezulu, senimbuso munye noma uyaziqhenya ipumelelo izwe lokuzalwa kwakhe ngenxa ezingeni lelisetulu ukwazi kazwelonke. Labo ngempela ukuhamba ukuze EU esikhathini esidlule, isibe kancane inhloso, ukuthi ngokuyinhloko ngenxa yesimo sezomnotho esinzima. Zonke abanye ukubonisa ukungabi nandaba noma, ngamanye amazwi, singanakwa. Ukwambula isimo sengqondo kuyavumelana ngokuphelele isimo sezakhamuzi baseMoldova abangakholelwa esikhathini esiningi, ukuthi ukwethulwa bezviza ngcono izimpilo zabo.
Prince George yaseCambridge, Prince: isithombe kanye nempilo yakho
UVladimir Volfovich Zhirinovsky: Biography of the umholi we the Liberal Democratic Party
Traian Basescu kuthathelwe izinyathelo, Biography
Russia e kwamaZwe, tembusave netemnotfo
"Spermaktin": ukubuyekezwa. "Spermaktin": Ukwakheka, manual, Analogue
Flash - Iyini? Kusho ukuthini nokuthi ukuhumusha?
Umsuka Social yomuntu ibhalansi izithakazelo amaqembu nomphakathi yentuthuko yezenhlalakahle
Oversayz - kuyini? isitayela izingubo anezingane
Indlela achitha ihlobo: amathiphu izingane nabazali
Zokuzivikela ingane ukuhlola: yini odokotela aphethwe izinyanga 3?
Planida - Iyini? Destiny, ukhanda, isabelo
Art sifundo. Udweba kanjani pizza?